Apple Patents Matambo maviri eApple Tarisa Nike Shanduro muHong Kong | Ndinobva mac
Apple patents tambo mbiri dzeApple Tarisa Nike Edition muHong Kong
Munguva yekuratidzwa kweiyo nyowani Apple Watch Series 1 uye Series 2 mamodheru, vakomana veCupertino vakapawo Apple Watch Nike Edition, iri chaizvo Apple Watch Series 2 asi ine yakasarudzika dial uye tambo. Zvisingashamisi, iyo Apple Tarisa Nike Edition tambo yakatanga kuwanikwa kubva kuChina pane yakawanda nhamba yewebhusaitis, izvo zvakamanikidza Apple kuzvimura zvakazvimiririra kuitira kuti vashandisi vevamwe Apple mhando vazvibate vasina kuenda kumusika wekunyepedzera kana kutenga iyo Apple Watch Nike Edition. Sezviri pachena Apple yakanyoresa mabhande maviri akafanana chaizvo neaya eNike modhi yeApple Watch nemahofisi epatent eHong Kong.
Sezvatinogona kuona mumifananidzo yakaburitswa, tambo dzinotipa zvakafanana dhizaini, asi kana tikatarisa tarisa, tinogona kuona kuti mhando idzi dzinopa huwandu hukuru hwemakomba, pamwe kune yakaringana kufefetwa pakati pevashandisi veiyi modhi. Asi kuna saint ipi iyo Apple inonyoresa iyi tambo nyowani nehofisi yeHong Kong patent?
Pamwe iwe unoda kutema zvekunyepedzera zvinouya zvichibva ipapo, kunyangwe ini ndisina chokwadi nazvo. Zvingangodaro Apple yaida kuzvidzivirira kubva kumatare anokwanisika kubva kune mamwe makambani anoti anga agadzira mabhande akadaro nguva refu Apple isati yaavazivisa zviri pamutemo.
Haizove nguva yekutanga Apple kusangana nedambudziko rakadai muChina. Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti vakomana veCupertino Ivo vanga vatove nematambudziko nekambani yaiti Apple yakateedzera pfungwa yeiyo iPhone, mhosva yakazopedzisira yakundwa neApple nekuda kwemvumo iyo yaive yambonyora zviri zviviri munyika nekunze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Apple patents tambo mbiri dzeApple Tarisa Nike Edition muHong Kong
Apple Mamepu atove nerutsigiro rwevanhu kutakura muHungary